KWIINTSUKU EZILI-10 UMZIMBA WAKHO UYA KUJIKA ULUNGE, ZAMA LA MALUNGISELELO ASEKHAYA! - INYANI.COM - UBUHLE
Iimuvi IGudi Padwa 2021: Yodwa! UTanya Sharma, Arshi Khan, Shubhangi kunye nabanye baTyhila iSicwangciso sabo soSuku
EzeMali Amaxabiso egolide Idip njengoko i-US Treasury ivelisa ukunyuka
Itekhnoloji UVijay Sale Ugadi kunye noThengiso lweGudi Padwa: Ukunikezelwa kwesaphulelo kwiiLaptops
Imidlalo I-IPL 2021, RR vs PBKS: U-KL Rahul uthi ukuwisa abahlali kuthathe umdlalo ngokunzulu, kodwa akayekanga ukukholelwa
Iindaba Usekela Mongameli uVenkaiah Naidu ufuna kupheliswe ucalucalulo ekuhlaleni
Iimoto I-Next-Gen Skoda Octavia yoVavanyo oluVulekileyo ngaphandle kokufihla: Ukuqalisa e-India Kungekudala
Ekhaya Ubuhle Ukunyamekelwa komzimba Ukhathalelo lomzimba oi-Denise Ngu Denise ubhaptizo | Ipapashwe: NgeCawa, nge-13 kaSeptemba, 2015, 15:04 [IST]
Umbala wolusu yenye yezona zinto zibalulekileyo kumaIndiya. Wonke umntu wesibini kwilizwe lethu ukhathazekile ngombala wabo, kwaye banokwenza nantoni na ukuphucula ulusu lwabo.
Kuyaziwa ngokubanzi ukuba abantu abanesikhumba esimnyama bachitha isixa semali esihle kwiimveliso ezibathembisa ngokukhazimla kweethoni zolusu kwaye ngaloo ndlela banike indlebe kunyango lwasekhaya.
Nangona kunjalo, ngokweengxelo zamva nje kuthiwa ezi khrimu zisekwe kwimarike aziyonto xa zithelekiswa namayeza asekhaya njengoko le yokugqibela inefuthe elisisigxina kuwo wonke umzimba.
Nokuba itan yakho, ezi zithako zendalo ziya kusebenza ngemizimba yakho yonke ukuze zikulungele. Yintoni ebalaseleyo ngala mayeza asebenzayo ngaphakathi kwiintsuku ezili-10.
Ke, ukuba ufuna ukulunga kwiintsuku nje ezili-10, nazi ezinye zezona zinto ziphambili zasekhitshini onokuzisebenzisa emzimbeni wakho uphela, ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga! Thatha ujongo:
Ilamuni ngokubanzi isetyenziselwa ukwenza mhlophe ulusu. Into ekufuneka uyenzile kukuthambisa umzimba wakho uphela ngejusi yelamuni kunye nomxube wobusi. Ezi zinto zimbini ziya kuhambisa iblantshi yakho ikwenze ulunge kwiintsuku ezili-10.
Unyango lwasekhaya lokutya okungafunekiyo
Ukuhlamba emanzini e-rose ngejusi yejusi yelamuni kunokunceda ukucoca ulusu lwakho ngokwendalo ngokwenza ukuba umzimba wakho ulunge kwiintsuku ezili-10. Nangona kunjalo, uxinzelelo lwelamuni kufuneka lube ngaphezulu, kuba amanzi e-rose akubonelela emva kokukhanya.
Ngaba ubusazi ukuba kunye neqanda elimhlophe, i-yolk nayo iyanceda kakhulu ekwenzeni ulusu lwakho lube lolulungileyo. Konke okufuneka ukwenze kukuthambisa ukupakisha amaqanda emzimbeni wakho kwaye uhlambe iviniga ukususa ivumba eliseleyo. Landela eli nyango kangangeentsuku ezili-10 ukufumana umzimba olungileyo ngokwendalo.
Ukuba ufuna ibala elilungileyo kunye nolusu olufanelekileyo kwiintsuku ezili-10, kufuneka uhlambe kubisi olusulungekileyo. Akukho mfuneko yesepha kuba ubisi ngokwalo luya kuwucoca umzimba, lushiye ngasemva ithoni entle yesikhumba.
Massage umzimba wakho uphela ngokudibanisa i-curd kunye nejusi yelamuni. Oku kunokutshisa kancinci ngenxa yeeacids ezikhoyo kuzo zombini izithako kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuwenza umzimba wakho ulunge kwiintsuku ezili-10.
Ngaba uyazi imbewu ye-cumin etyunyuziweyo eyongezwe emanzini okuhlamba inokunceda ukuphucula ulusu lwakho, kodwa kunokuthatha ngaphezulu kweentsuku ezili-10. Nangona kunjalo, ukusebenzisa uncamathiselo omncinci we-cumin yembewu yomgubo kunye nobisi emzimbeni wakho kuya kuphucula umbala wakho.
Izinto ezikhoyo kumanzi ecoconut ziya kwenza imimangaliso kulusu lwakho. Ayikwenzi ukuba ulunge kwiintsuku ezili-10 kuphela kodwa iyanceda nokususa amabala namabala amnyama.
amayeza enzelwe ulusu oluqaqambileyo kunye nokulingana
uzisusa njani iinwele kwindawo yabasetyhini
Ungasusa njani iinwele zesilevu ngokwemvelo
zingaphi surya namaskar ngosuku
kubi ukutya iibhanana namaqanda kunye